Culimada Soomaalida Kenya iyo rabshadaha ka socda Islii, Nairobi. - Caasimada Online
Home Warar Culimada Soomaalida Kenya iyo rabshadaha ka socda Islii, Nairobi.
Culimada Soomaalida Kenya iyo rabshadaha ka socda Islii, Nairobi.
Wixii ka dambeeyay markii gaari dad Shacab ah ay saarnaayeen lagu qarxiyay Kenya ayaa waxaa ka soconaya dalkaas aargoosi ay wadaan dhalinyaro Kenya ah kuwaas oo la soo warinayo inay kufsadeen Ilaa Tobon gabdhood.
Culumaa’udiinka Soomaalida ee Kenya ayaa falkaas cambaareeyay ee lagu dhibaataynayo Soomaalida laguna kufsanayo gabdhahahooda.
Kulan ay yeesheen Culimadan ayaa waxaa ay ugu hadleen labo arin oo kala ah qaraxii gaariga dadka shacabka ay saarnaayeen iyo dhibaatada Soomaalida ay wajahayaan.
Sheekh Abuukar Jimcaale oo kamid ah Culumada kulanka yeeshay ayaa wax kabaxsan diinta Islaamka ku sheegay in la beegsado dad aan wax galabsan oo lagu qarxiyo gaari halka reer Kenya uu dhankooda ku cambaareeyay dhibaataynta dadka Soonaalida ah.
Ugu dambayn Culimadan ayaa waxaa ay dowlada Kenya ka codsadeen inay wax ka qabtaan joojin tacdiyada dadka Soomaalida lagu hayo.